Ny liona matory, misitrika any amin'ny nosy Galapagos | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | Ekoatera, General, tora-pasika, Quito
Ny Sleeping Lion (na Kicker's Rock amin'ny teny Anglisy) dia nosy tsy misy mponina kilometatra vitsivitsy miala ny nosin'i San Cristóbal, ao amin'ny Valan-javaboary Nosy Galapagos (Ekoatera). Toerana voaaro tanteraka izy io, ary fady ny mitanjozotra, matory na manao hetsika fa ny antsitrika sy ny fitetezana ny vatolampy ihany no avela.
Izy io dia famolavolana vatolampy niavian'ny volkano roa niavaka noforonin'ny nosy lehibe roa izay nosarahan'ny fihoaran'ny ranomasina, ny tsirairay amin'izy ireo dia mahatratra 100 metatra ambonin'ny ranomasina ary 100 hafa ambanin'ny ranomasina. Rindrina mitsangana roa mahavariana amin'ny vatolampy tsirairay sy fantsona tery eo afovoany izay ivoahan'ny rano ranomasina.
Ity fandaminana mampiavaka ity nosy ity dia nahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana fisitrihana tsara indrindra any amin'ny Nosy Galapagos sy manerantany. Ny manodidina an'i Kicker's Rock dia miaina karazan-dranomasina sy karazan-dranomasina toy ny fano, antsantsa martsa, antsantsa manga, liona an-dranomasina, ...
1 Ahoana no ahatongavana any León Dormido?
2 Inona no hatao ary inona no ho hitanao ao amin'ny Ayer's Rock?
Ahoana no ahatongavana any León Dormido?
Maha-Nosy ary arovan'ny lalànan'ny valan-javaboary any Ekoatera, azon'ny ranomasina ihany no ahatongavana. Raha te hiditra ao Galapagos dia tsy maintsy atao amin'ny fiaramanidina avy any amin'ny tanibe, ny ankamaroan'ny sidina dia miainga avy any Ekoatera ary manokana an'i Guayaquil, azo atao ihany koa ny manatona ireo nosy paradisaaka avy any Amerika Afovoany. Isaky ny fidirana sy ny fivoahan'ny nosy dia manao fizahana kely izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy miditra na mitondra zavatra mety hanakantsakana ny tontolo iainana manokana amin'ny valan-javaboary ianao.
Ny zavatra mora indrindra dia manomboka avy any Puerto Baquerizo Moreno, tanàna manan-danja indrindra ao amin'ny Nosy San Cristóbal. Tao anatin'ny adiny roa dia tratra ilay nosy. Isla San Cristóbal dia azon'ny ranomasina avy any Santa Cruz (2 ka hatramin'ny 3 ora) na amin'ny fiaramanidina avy amin'ny tanibe, dia iray amin'ireo nosy vitsy manana seranam-piaramanidina.
Safidy iray hafa dia avy amin'ny renivohitr'i Galapagos, Puerto Ayora ao amin'ny nosy Santa Cruz.. Amin'ity tranga ity dia mety ho dia adiny 4 eo ho eo izany. Etsy ankilany, azonao atao ny manofa sambo tsy miankina mandritra ny andro vitsivitsy ary mandeha mitsidika ireo nosy manan-danja indrindra amin'ny valan-javaboary, anisan'izany ny antsitrika eto.
Na inona na inona seranan-tsambo misy azy, tsy maintsy mandeha miaraka amina sambo fialamboly miaraka amin'ny alalana manokana avy amin'ny governemanta eo an-toerana sy any Ekoatoriana, izany hoe, manakaiky ny filentehana ao amin'ny Sleeping Lion dia mitaky fanofana masoivoho na orinasa tsy miankina manana alalana.
Ny vidiny manodidina ny olona avy any Puerto Baquerizo Moreno dia manodidina ny $ 80 ary misy làlambe iray andro mijanona amin'ny torapasika virjiny (Playa del Maglesito ny ankamaroany), fitaovana antsitrika sy snorkeling ary antsitrika mandritra ny adiny 2 ao amin'ny Kicker's Rock. Tsy haiko ny vidiny avy any Puerto Ayora. Ny vidin'ny fanofana sambo mandritra ny herinandro na andro maromaro dia tena avo lenta, na dia tsy mora aza ny fitsidihana ny Nosy Galapagos irery. Raha ny amiko dia nandalo irery aho ary nanofa ilay fitsangantsanganana avy any Puerto Baquerizo Moreno.
Inona no hatao ary inona no ho hitanao ao amin'ny Ayer's Rock?
Rehefa manakaiky kokoa an'i León Dormido isika dia efa hitantsika fa toerana majika sy mahatalanjona io, azo antoka fa iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena. Ny sambo foana mandehandeha eran'ny nosy izy ireo mahita ireo toetra mampiavaka ny moron'ireo vatolampy sy ireo vorona monina eo aminy. Ny halaviran'ny rindriny dia mahitsy ary ny halaliny avo dia avo ianao ka afaka manakaiky ny nosy handinika ireo karazana biby rehetra amin'ny nosy (ny ankamaroan'izy ireo dia tsy hita ao Galapagos fotsiny). Ny zavatra hita eto dia tsy mitovy amin'ny hitantsika any amin'ny Mediteraneana, ny karazany sy ny virijina maro kokoa.
Ny tena manintona dia mazava ho azy fa ambanin'ny ranomasina, antsitrika na snorkeling. Raha mamela azy ny onja sy ny toetrandro dia afaka mitsoraka amin'ny fantsona ety ianao. Amin'izao fotoana izao any amin'ny ranomasina dia mahery ny onjan-dranomasina, noho izany dia mamporisika anao aho hanao wetsuit na milentika na snorkeling ianao, amin'ny ankapobeny dia be ny maripana an-dranomasina mandritra ny taona fa tsara kokoa ny manao palitao.
Raha ny amiko, alohan'ny hitsambikinana tao anaty rano dia hitako liona an-dranomasina am-polony milomano eo akaikin'ny samboNanome ahy fiheverana sy tahotra izany, na izany aza, dia ho zavatra tsy manam-paharoa izany, ka nitsambikina tao anaty rano aho nefa tsy nieritreritra.
Tao anaty rano, nitafy ny solomaso aho, nijery ambany ary gaga! Antsantsa, antsantsa manga. Mbola tsy nanao antsitrika antsitrika mihitsy izy, mainka fa ny nilomany tamin'ny antsantsa. Any Espana dia manidy ny morontsiraka iray manontolo izy ireo rehefa manakaiky ny torapasika ny tintorera, eto izahay dia hiara-milomano amin'izy ireo toa tsy nisy na inona na inona nitranga, eny, amin'ny halavirana iray raha sanatria.
Amin'ny voalohany dia milentika amin'ny fantsona manasaraka ireo vatolampy roa isika, mijery ambany hita ny antsantsa, ny karazan-trondro rehetra sy ny liona an-dranomasina. Amin'ny faran'ity fantsona ity dia mankany amin'ny nosy lehibe isika handinika ny haran-dranomasina sy trondro monina eo akaikiny, misy loko hafakely daholo. Liona an-dranomasina milalao miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra, akaiky ny vondrona.
Nandehandeha nitety ny nosy iray manontolo izahay mba hankafizanay ny lokon'ny vato, ny trondro ary ny haran-dranomasina, amin'ny fotoana rehetra tazana izy ireo sokatra, taratra ary liona. Tsy hitanay intsony ireo antsantsa, satria nolazaina taminay fa saika nifindra teo akaikin'ny fantsona foana izy ireo.
2 amin'ny antsitrika sy snorkeling tanteraka. Mahatalanjona fotsiny, traikefa izay atoro anao raha mandeha any Ekoatera sy Galapagos ianao.
Heveriko fa io no toerana tsara indrindra hankafizana na hianaranao milentika, izay rehetra hitanao dia hatsaran-tarehy tsy hita isa, azoko antoka fa tsy ho diso fanantenana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Ekoatera » Ilay Liona Matory, misitrika any amin'ny Nosy Galapagos